Monday,7Aug, 2017 1:31 PM
२०४६ सालको परिवर्तनपछि राजतन्त्र संवैधानिक हैसियतमा पुग्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । बहुदलीय व्यवस्थासँगै पञ्चायतका हस्तीहरु राजावादी रुझानका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा विभिन्न पार्टी गठन गरी राजनीति सुरु गरेका हुन् । यी राजावादी पार्टीहरुबीच पार्टी एकता र विभाजनको लुकामारी त्यस बेलादेखि नै चल्दै आएको छ ।
‘एलिट’ स्वार्थका साथ स्थापित राप्रपा सुरुमै लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नामबाट संचालित भएको थियो । कहिले मिलन कहिले विछोडको राप्रपा राजनीतिको १८औं प्रहसनमा पुग्दा फेरि फुट भएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई माया मार्दै पशुपति शमशेर जबराको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । १४ जना मात्र सांसदसहितको पार्टी गुठी चलाएका राणाले आठ महिना अघि २४ सांसदका धनी कमल थापासँग एकीकरण गरेका थिए । अहिले पार्टी विभाजन गर्दा राणाले थापाका कैयौं सांसद र नेताहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएका छन् ।
कमल थापाको उदय
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालबाट सत्ता हत्याए पछि कमल थापालाई सत्रका दाउ लाग्न थालेको थियो । चरम राजावादी रुझानमा विश्वास गर्ने थापा २०६१ साल माघ १९ को ‘कु’ पछि गृहमन्त्री बनेपछि थप सक्रिय भएका थिए ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको पहिलो संविधान सभामा अस्तित्व जोगाएका कमल थापाले दोस्रो संविधानसभामा भने अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै चौंथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भए । स्पष्ट वक्ता र कुटिल राजनीतिका खेलाडी थापा अहिले भने आफ्नै सहकर्मीहरुबाट खेदिएका छन् ।
विभाजन र एकता
सत्ता र शक्तिकै लागि राप्रपा समयसमयमा एकीकृत हुने र समयसमयमा विभाजित हुने गरेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेर स्थापना भएको राप्रपामा कमल थापा प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि कट्टर राजतन्त्रको पक्षपोषण हुँदै आएको थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलन पछि फेरिएको शासकीय स्वरुप पछि भने राप्रपामा विभाजित मत रहँदै आएको थियो । राजतन्त्र र जनताले स्वीकार गरेको गणतन्त्रको फरकफरक ओकालत गर्ने समुहरुहरु छुट्टाछुट्टै भए । स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शमशेर जबरा लगायतको समूह राप्रपाको नाममा गणतन्त्रको पक्षमै लाग्यो भने कमल थापा समूह राप्रपा नेपालको नाममा कट्टर हिन्दु राष्ट्रवाद र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आयो ।
दुईथरी रुझानका बीच आठ महिना अघि दुई पार्टीबीच एकता पनि भयो । एकतापछि कट्टटर राजावादी मानिने कमल थापाले हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको उच्चारणै गर्न छाडे भने गणतन्त्रबादी नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी कट्टर राजवादी र हिन्दु राज्यको पक्षमा लागे । यता एकताको एकवर्ष पनि नवित्दै वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले भने पुनः औपचारिक रुपमा गणतन्त्रलाई नै पछाउँदै पार्टी विभाजन गरेका छन् ।
फरक धारको यूटर्न
राजनीतिक परिवर्तनलाई आफुअनुकुल प्रयोग गर्न सिपालु राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले अझै पनि राजासहितको प्रजातन्त्र भन्दै आएको छ । तर, अध्यक्ष थापाले यसैलाई मूल एजेण्डा बनाका छैनन् । किनकी, उनलाई सत्ताको भर्याङ् पनि समात्नु जो छ ।
सनातन हिन्दुराज्य र राजासहितको प्रजातन्त्र थापाको राप्रपाले उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेण्डा त हो, तर अहिले त्यसलाई दस्तावेजमा सीमित गरिएको छ । तैपनि, थापाका कैयौं नेता कार्यकर्ताहरु राजासहितको हिन्दु अधिराज्यका लागि प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि ज्यान जोखिममा राखेरै भए पनि थापाका नेता कार्यकर्ताहरु हिन्दुराज्य र राजासहितको प्रजातन्त्रकोे पक्षमै उभिएका थिए । र, अहिले पनि उनीहरु त्यसमा नै प्रतिवद्ध देखिन्छन् ।
राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन भन्छन्, ‘राजतन्त्रको आवाज उठाउँदा ज्यान जोगाउन गा-हो भएको समयमा त आफुहरु यो एजेण्डाको पक्षमा लाग्यौं । अहिले त यो एजेण्डा झनै स्थापित हुदै गएको छ ।’
राष्ट्रियता, सुशासन, दिगो विकास र लक्ष्य प्राप्तिमै यतिवेला जनताको ध्यान गएकाले अध्यक्ष थापा विकासकै गतिविधिमा केन्द्रित भएको भन्दै महामन्त्री लिङ्देनले अध्यक्षको बचाउ गरेका छन् ।
लोहनीले पार्टी फुटाउँदा थापा पक्ष खुशी
पार्टी एकीकरण लगत्तै राप्रपाबाट अलग भै नयाँ पार्टी गठन गरेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग राप्रपाकै नेताहरु खुशी छन् । दोस्रो जनआन्दोलन पछि गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर लागेका डा. लोहनी विस्तारै विस्तारै राजतन्त्रको पक्षमा लागेको भन्दै कमल थापा पक्षधर कट्टर राजावादीहरु खुशी भए । महामन्त्री लिङ्देनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिहरु पुनः राजतन्त्रको मुद्दामा आउनुले मुद्दा औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।
एकीकरण पछिको पहिलो फुट लोहनी नेतृत्वमा
राप्रपा एकीकरण पछिको एकताको महाधिबेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पुरा भएको छ । तर महाधिबेशनलाई एकताको रुपमा लिइएको भए पनि लामो समय टिक्न भने सकेन । केही हप्तामै राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरे डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । अलग भएको घोषणा गरेको केही हप्तामा अलग पार्टी समेत घोषणा गरे । पार्टी घोषणाको ४ महिना भैसकेको छ । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–राष्ट्रवादी नाममा नयाँ पार्टीबाट यतिबेला नेताहरु देश दौडाहामा छन् । जसको नेतृत्व गरेका छन् डा. लोहनीले ।
राप्रपा राष्ट्रवादीका वरिष्ठ नेता हुन् केशरबहादुर विष्ट । विष्टका अनुसार मुख्य चार एजेण्डा स्थापित गर्न नयाँ पार्टी गठन गरिएको हो :
संविधान संशोधन गरि नेपालमा सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न दवाव दिने ।
संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था स्थापना गर्ने ।
भष्ट्राचारको नियन्त्रण गरी मुलुकका सुशासन कायम गर्ने ।
आर्थिक समृद्धिका लागि विकास र पछाडि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङग र भूगोलका आधारमा अधिकार स्थापित गर्ने ।
लोहनीका नेताहरु कमल थापा पक्षलाई खिस्सिट्युरी गर्छन् । नयाँ पार्टी गठनपछि ६४ जिल्लामा सम्र्पक समिति स्थापना गरेका राष्ट्रवादीका नेताहरु अहिले संगठन विस्तारमै लागेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबाट झुटो बोल्ने र दुनियाँलाई छल्ने मात्र काम भएको दाबी गर्ने राष्ट्रवादीका वरिष्ठ नेता विष्ट भन्छन्, ‘गणतन्त्रको संविधान विश्वको उत्कृष्ट भनेर भन्ने, अनि राजतन्त्र ल्याउछु भनेर जोक्कर कुरा गरेर जनता झुक्काउने काम भयो । अहिले कोही जनता नबुझ्ने छैनन् । त्यही भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँको के हालत भयो देख्नुभयो नि ।’
डा. लोहनीहरुले पार्टी विभाजन गरेको केही समय पछि फेरि राप्रपा फुटेको छ । पार्टी फुटमा सैद्धान्तिक कारण कुनै देखिदैन । तर, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा दुई नेताहरुबीच बढेको इगोका कारण पार्टी एकीकरणको आठ महिना पछि पार्टीमा ठूलै विभाजन भएको छ ।
डा. लोहनीहरुले गरेको विभाजन भन्दा यसपटकको विभाजनको आयातन बढी छ । राणा समुहले पूर्व राप्रपा नेपालसम्वद्ध नेता र सांसद्हरुलाई समेत आफुमा तान्न सफल भएका छन् ।
विभाजन किन ?
फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकता महाधिवशेन गरेको राप्रपाको इतिहासमा यो विभाजनको १८ औं प्रहसन हो ।
फागुनमा एकता महाधिवेशन गरेको राप्रपामा यति छिट्टै ठूलो विभाजन भएको यो पहिलो पटक हो । वरिष्ठ नेता राणाले १९ सासंद्सहित आफ्नो नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी समेत गराइसकेका छन् । १९ सांसदले संसद् सचिवालयलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद साम्य पार्न नसक्दा राप्रपा विभाजन भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैंले नेतृत्व गर्न खोज्दा राणा समूहले उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिएको र आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि सरकारबाट सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दै थापाले राणा समूहका सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोकेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
आफूलाई उपप्रधानसहित मुख्य मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि थापा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा पुगेका थिए । थापालाई रोकेर मन्त्रीको सपना देखेका सांसदहरू चिढिएर पार्टी विभाजन गरेको थापानिकट नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
अबको एजेण्डा !
पशुपति शमशेर जबरा नेतृत्वको नयाँ दल राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले गणतन्त्रको पक्षमा उभिने बताएको छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकता गर्दा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा थियो ।
पार्टीको महाधिवेशनबाट राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रसहितको राप्रपाको विधान निर्वाचन आयोगले समेत अस्वीकार गरेको अवस्थामा जनता र आयोगको चाहनामा पार्टी चल्ने राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) की नेतृ सरोज शर्मा बताउँछिन् ।
शर्माका अनुसार नयाँ पार्टीको मुख्य एजेण्डा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सनानत हिन्दु राष्ट्र हुनेछ । मुलुकको परिवर्तनलाई स्वीकार गरिसकेकाले गणतन्त्रको पक्षमा उभिने उनको तर्क छ ।
नेतृ शर्मा भन्छिन्, ‘धर्मनिरपेक्षताको सट्टा सनानत हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने मत अघि सार्ने विषयमा भने पार्टीमा छलफल हुनेछ तर, अहिले नै टुंगो भने लागि सकेको छैन ।’ राणा पार्टीले डा. लोहनीको पार्टीसँग पनि एकताको प्रयास गर्ने बताएको छ ।